Indonesia in Focus: Baro (raadso Sciences) loogu talo galay dadka ku faraxsan yahay.
Baro (raadso Sciences) loogu talo galay dadka ku faraxsan yahay.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (319)
(Qaybta saddex boqol iyo sagaal iyo toban), Depok, West Java, Indonesia, 23 July 2015, 19:30 pm)
Ilaah oo uu hadalkiisii ku Quraanka siinayaa barakadiisa oo ay ku jiraan maal, rizqiga) hawo neefsasho (oxygen) waa cusub, oo kalluunka badda ku, natiijada khayraadka dabiiciga ah, sida batroolka, gaaska dabiiciga ah, dahab, iyo lacag, iyo sarreen, iyo beeraha dalagga / bariis Paddy, sarreen iyo hadhuudh in ay u dhexecya guudo, haddii aadanaha, ama xoolaha, iyo nicmada Eebe (Risqi) waxaa la siiyaa qofka bini'aadamka ah ee kooxaha kala duwan, isirka, jinsiyadda, kala duwanaanta luqadda, iyo kala duwanaanshaha midabka maqaarka, haddii ay ku nool hareeraha dhulbaraha iyo kuwa ku nool Pole Koonfurta, Waqooyi reer Poland, qaaradda Aasiya, Continental Europe, qaaradda Afrika, Continent Australia, Ameerika, iyo quruumaha ku nool badda Pacific, iyo badaha Indian.
Sidee badan oo Muslimiin ah iyo in uu dunida ruux muslim ah hantida oo keliya waxoogaa yar (si dirqi ah ku filan oo ay cunaan oo wax cabbaan), laakiin uu qalbigiisa ku faraxsan yahay nolosha ah oo degan, fududaato in Ilaah u siiyey isaga inay hore u khasnad ah oo qiimo dareemay.
Talooyin in uu korka Al-Quraanka iyo Sunnaha (Xadiiska / Al-xikma).
Ardayga aqoonta ay ogaadaan in waxbarasho uu leeyahay dhowr tallaabo ay tahay in la soo maray. Oo wuxuu lahaa inuu ku soo bilowdo ka ugu muhiimsan markaas waa muhiim. Waa in uu uusan ha degdegin, xitaa waa in uu samir iyo ogaadaan heerka kartida iyada.
The culimada aan marnaba mari iyo weecin daraasaadka sababtoo ah marxaladaha tartiib tartiib ah in waxbarashadooda ay tahay habka ugu hambalyo si ay u bartaan aqoonta. Martigeliso daraasaddan ku salaysan yahay hadalka Eebe wa Tabaaraka Allaah,
"Al-Aayado-ah (waxaana ku soo dejinay) si tartiib tartiib ah oo aad (Nabiyow) ku akhrido dadka oo aan si tartiib tartiib tartiib ayay hoos." [Al-Israa ': 106]
Oo haddana Eraygii imtithaal,
"Oo kuwii gaaloobay waxay dhaheen Maxaad al-Quraanka aan lagu soo dajiyey oo dhan Mar kaliya? 'Sidaas daraaddeed qalbigiinnu (Nabiyow) waannu ku Xoojin iyada oo leh, waxaana ay u akhriyaan tartil (si tartiib tartiib ah, si tartiib ah oo si sax ah)." [ Al-Furqan: 32]
Aadanaha oo badan ayaa ka hor istaagay ka barto sababta oo ah ujeedada ka tago, faridda ah (aasaas aasaasiga ah). Waa maxay ushul loogu tala galay waa Al-Quraanka iyo Sunnaha.
Xeer ilaaliyaha A muhiimado kala sayniska ha in uu korka Al-Aayado-ah ka dibna ku xadiisyada Nabiga sallallaahu 'wa. Noocan oo kale ah waxaa lagula talinayaa in ay Salaf dadka raba in ay helaan aqoon iyaga ka mid ah.
Imam Abu Cumar Yusuf bin Cabdullaah bin Muhammad Ibn 'Abd al-Barr (th dhintay. 463 H) rahimahullaah yiri, "Baahida uu leeyahay heerarka aqoonta iyo marxaladaha in laguma xad gudbaan. Ee ah kuwa buriya lahaa oo dhan, ka dibna uu jebiyey Jidka la Salaf, oo ku xadgudbay jidkooday ku ujeedada, ka dibna uu ka lumay, oo buriyey, maxaa yeelay ijtihad, ka dibna uu u iilata.
Laga bilaabo sayniska waa in uu korka u daliil ah oo la fahmo. Wax kasta oo kaa caawin kara inaan garto, markaas waa qasab in ay bartaan. Ma dhahayo in in uu korka oo dhan Al-Aayado-waa qasab, laakiin waxaan leeyahay in ay tahay qasab (sunnah socdo khasab ah) iyo waajib ah qof kasta oo raba in ay noqdaan kuwa dhawrsada ah, oo aan qasab.
Al-Aayado-waa caadiga ah ee sayniska. Yaa waa in ay korka ka hor baligh da'da, ka dibna ay qaataan waqti ay si ay u bartaan waxa ku caawin kartaa fahamka qaab Carabi, waa caawiyaha ugu weyn ee loo gaaro hadafka ah in la fahmo Al-Quraanka iyo Sunnaha-Sunnah Nabiga sallallaahu 'wa .. ,
Day u-Sunnah Sunnah caan ku yihiin, oo ay weli ka Nabiga sallallaahu 'wa in xeer la ujeedada sayniska Eebe Ilaaha Qaadirka ah in uu Book. Iyo sharciyada Sunnah furay Al-Aayado-isaga ...
Qof kasta oo doonaya Sunnah-Sunnah, waa in uu mudnaanta siiyaan xadiisyada ku Qisadii wadaaddadii, oo tsiqah iyo hafalannya badan (huffazh) . "Markaas, O walaalkay, aad qabtid in uu korka, faridda iyo caawinaad oo doondoonaya leh.
Imam Ibn jamaacadda (th dhintay. 733 H) rahimahullaah yiri, "ha ka (xeer-sayniska) bilaabay Kitabullaahil 'Aziiz, waxa uu korka la mutqin (ahaantii bisil), ku dadaala si ay u fahmaan inuu faallo, iyo dhammaan aqoonta (science Al- Aayado-ah). Maxaa yeelay, al-Aayado-waa caadiga ah ee sayniska, oo ay waalidka, iyo ugu muhiimsan. "
Sidaas darteed, bartilmaameedka ugu muhiimsan ee xeer-ilaalinta ah ee sayniska waa in uu korka ka qur'aanka iyo Sunnaha dhab Nabiga. Ka dib markii in ha xafidi buugaagta ee sharaf, labada berrinkii Aqeedah, Duruusta Muhiimka, xadiis, nahwu, ama fara-IDH. Sheikh Muhammad ibn Saalax al-'Utsaimin rahimahullaah yiri, "Waxa ugu muhiimsan in uu qof kale ee waxbarashada waa in ay bartaan fasiraadda gebi ahaanba Kalamullaah sababtoo ah sayniska Kalamullaah. Eebe adkaade sheegay,
"... Waxaan ka soo Dejinay Kitaab ah (Al-Quraanka) si aad u sheegto wax kasta hanuun iyo Naxariis iyo bishaarada dadka kuwaas oo isu dhiibay (Muslimiinta)." [An-Nahl: 89]
Hore Sahaba marnaba maray toban aayadahan ilaa ay ka bartaan waxa ku sugan in qaab sayniska iyo hay'ad samafal si ay u bartaan Al-Aayado-ah, sayniska, iyo jacayl iyo sidoo. Waxaan qabaa in ay tani tahay waxa ugu muhiimsan. Markaas socday mid ka mid ah dhallinyarada-gaar ahaan carruurta-in lagu bilaabo xafididda Al-Aayado-ah ... Isla ha xeer ilaalinta ee sayniska u hibeeyeen ilaa ay Sunnah sababta oo ah waxa saldhig u ah Shareecada aanu weligiis u kala saari karaan, Al-Aayado-ah iyo Sunnah labada dajinta. Oo waxa uu baaqi ku Sunnah ee in ay xiranyihiin oo waxa ku xusan Al-Aayado-ah.
Eebe adkaade sheegay,
"... Markaasaa (sidoo kale, sababtoo ah) Eebe soo dajiyey oo Kitaab (Al-Aayado-ah) iyo xigmada (Sunnaha) adiga iyo idiin baray waxaydaan oo aydaan aqoon. . Hadiyadda Ilaah idinku arsuqay waa weyn "[An-Nisa ': 113] 
• Talooyinka xafididda Al-Aayado-ah 
Markii hore waxay ahayd xafiday Al-Aayado-ah ee aragtida sheekh ugu muhiimsan. Waxaa Iyadoo ay bilaabaan barashada. Taasi waa sababta ay marnaba ahaynse inuu ku soo bilowdo xafididda Al-Aayado-ah. Hafalannya waa dabeecadda oo u muuqata in ay bulshada ka mid ah culimada iyo xeer-ilaalinta ah ee sayniska. Inta badan Salaf aadka loo arkaa dulli ah ee aan xafididda Al-Aayado-ah. Waxaa ka mid ah caddaymaha waa waxa lagu qeexay al-Haafiz Ibn Xajar (dhintay th. 852 H) ee Taqriibut Tahdziib (I / 664, ma. 4529), Biography of 'Cusmaan ibn Muhammad ibn Abi Abi Shaybah, "Waa tsiqah, Hafiz ah oo oo caan ah, laakiin waxa uu leeyahay auham (qalad) oo sheegay in uu la uma xafiday Al-Aayado-ah. "
Illeen xafidi Al-Aayado-ah ma aha waajib ku ah on xeer ee aqoonta, laakiin munaasabadda ahaa fure u xafididda iyo fahamka habka. Ha sayniska xeer ogyahay in xafididda Al-Aayado-ah oo ay ku dhaqmaan waxay ku kordhin kartaa heerka uu u qaadis. Nabiga sallallaahu 'wa yiri,
"Runtii, imtithaal wiish (degrees) qaar ka mid ah dadka qaba Kitaabka (Al-Aayado-ah) iyo xaalufinta kale la Al-Aayado-ah". 
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax oo kaa caawin kara oo dhan xeer ilaalinta ee sayniska in uu korka Al-Aayado-ah:
1. Ilaah ka baryaynaa Ilaaha Qaadirka ah la daacadda si ay u la siin istareexsan ee xafididda Al-Aayado-ah. Ha xafidi Al-Aayado-ah loo sameeyo daacadda oo keliya Raalli ahaanshaha Eebe Jannatul.
2. Sound off aayaadka uu ugu fiican ayaa loo xafiday in reciter ah 'reading wanaagsan iyo xusuusta.
3. celcelin ngulang aayaadka xafiday in jadwalka iyo isku day in aad anshaxa.
4. Isticmaalka Mushaf Al-Aayado-ah si uu ugu xoojiyo xasuusta.
5. celcelin aayaadka ngulang xafiday toban / labaatan jeer ayaa sidoo kale peared dheeraad ah oo ku-la taagan, fadhiya, iyo socodka.
6. Akhri aayaadka cusub waxaa lagu xafiday Salaadda sababta oo ah waxa sii socoshada ciidamada karaa waa caksiga ah.
7. Akhri turjumaad aayadda iyo faallo uu soo xafiday.
8. Ka fogow dembiga iyo maksiyat.
Imam Adh-Dahhak (th dhintay. 102 H) rahimahullaah yiri, "Ma aha qof si ay u bartaan Al-Aayado-ah ka dibna uu ka illoobayo, laakiin sabab u ah dembiga." Waxa uu markaas uu ereyga Ilaah ka akhri,
". Oo wax alla wixii musiiba ah dhacdo aad yahay sababta oo ah waxa aad gacmihiinna, oo Ilaah ku cafiyo badan (qalad)" [Ash-Syuura: 30]
Markaas ayuu hadalkiisa raaciyay, "musiibo waa ka weyn yahay halmaamay al-Aayado-ah?" 
9. Go'aaminta jadwal joogto ah si loo ogaado xadka Cajami ah maalin kasta (waxa ku xafiday maalin kasta).
Qorsheysay in aan menyelisihi xeerarka ama ku badasho, marka laga reebo sida waxaa jira waxyaabo in la sameeyo xaaladaha degdegga ah.
10. Miyey habboon tahay in baaragaraaf diahafal yar maalin kasta in ka badan lagu lifaaqo
Waayo, kuwa xafiday dhawr cutub ka mid ah Al-Aayado-ah, ama kuwa xafiday 30 cutub, isaga mar walba muraja'ah (ku celinayaa-ngulang) munaasabadda ha oo sidoo kale sii Al-Aayado-waa ka dhaqso badan khasaaraha ka mid ah geel xidhan.
Had iyo jeer akhri Quraanka this. By Kan taas oo nafta Muxammad waa in gacmihiisu, runtii, Al-Aayado-ah si fudud kala badan geel ah oo ku gunti ah "
• Ku xir ee xafidaadda iyo XUSUUSAN
Waxaa jira waxyaabo muhiim ah in ka caawin kara in xeer ilaalinta ee sayniska in uu korka ama xusuusan casharka la dulmar guud oo wanaagsan, oo ay ku jiraan:
1. ujeedka mengikhlaskan waayo, Ilaah iyo filan abaal marin Eebe Xaggiisa ka ahaatay.
2. Marka laga soo tago wax ka reebay oo mamnuuc ah shareecada.
3. natiijada ganacsiga wanaagsan, cunista cuntada kosher oo ka fog haram ka.
4. Bannee Quluubta busyness kala duwan.
5. Ma korka marka aad u gaajaysan, oomman, daal, ama marka uu wadnaha ku mashquulsan arrimo kale ahaa.
6. High-ka yeeli, ku dadaalo, oo sii waday in ay ku soo celiyaan casharada si ay si guul leh u xafidi.
7. Aan niyad jabin oo ay awood u fool xun in uu korka ka sii noqnoqda, ngulang casharka.
8. celcelin casharada cod in la maqli karo, maxaa yeelay, dhagaysiga kaa caawin kara in xafididda casharada.
9. Isticmaalka caawimo ah ee qalinka ama warqad si ay u diyaariyaan wax kasta oo kaa caawin kara in xafididda, ama ay ku soo celiyaan-pela-fog ngulang hab qoraal ah.
10 Oo dhan ee kor ku xusan ka hor, ha had iyo jeer u heelan yihiin inay imtithaal. 
Rahimahullah Imam al-Bukhaari ayaa ah xusuusteyda iigu xoog leh. Waxa uu la weydiiyey, "Ma daroogada iloobin in?" Waxa uu ku jawaabay, "Had iyo jeer eegi inay jartaan" (Waxaa la aqristay Soona celiya). 
• Time-waqtigii xafididda
Imam Ibn jamaacadda rahimahullaah yiri, "Waqtiga ugu wanaagsan in uu korka waa marka hadhuudhka ah; si ay uga hadlaan in subaxdii; in ay qoraan inta lagu jiro maalintii, iyo in muthala'ah oo uu kala hadlo (mudzakarah) habeenkii. "
Al-Khatib al-Baghdadi (dhintay th. 463 H) rahimahullaah yiri, "Waqtiga ugu wanaagsan in uu korka waa marka waagu waqti, ka dibna maalinta dhexdeeda, oo goor dambe oo subaxdii." Wuxuu intaa ku daray, "xafidaadda fiidkii ka badan in ay soo faa'iidooyinka halkii ay ka xafididda inta lagu jiro maalinta, iyo marka ay gaajoodaan (taas oo aan aad) waa ka badan faa'iido badan marka buuxa. "
• Meelaha ugu fiican ee xafididda
Imam Ibn jamaacadda sheegay -menukil ee al-Khatib, "Meesha ugu fiican in uu korka waa qol iyo meel wax ka wax ka dhigaya kusugan." Waxa uu sheegay, "Ma wanaagsana haddii ay jirto waa la xafiday ee warshad, wareegsan geedaha bahweynta kubada, on qararka webiga, dhexe ee wadada, iyo meelaha buuqa badan, sababtoo ah waa (guud ahaan) hortagi karaa wadnaha madhan (in uu korka). "
• Waa in uu aqoon u leh ee Xeer Science Al-Aayado-ah
'Bin Abdullah' Amr bin al-`As radhiyallaahu 'anhuma yiri, "Rasuulkii Eebe sallallaahu' wa hawada-hadalka ii,
"Akhri Al-Aayado-ah (in la shaabadeeyo) bil walba." 'Abdullah yiri, waxaan is-idhi, "Runtii, waxaan awood u badan falaysaan ahay." Nabiga wuxuu yiri, "ka dibna akhri (in la shaabadeeyo) iyo labaatan maalmood."' Abdullah yiri, waxaan is-idhi, "Runtii, waxaan awood u badan falaysaan ahay." Nabiga wuxuu yiri, "Haddii ay sidaas tahay, akhri (in la shaabadeeyo) intii toddoba maalmood ah oo aan ka badnayn in." 
Jundub bin Cabdullaah ibn Sufyan al-Bujali (d dhexeeya th. 60-70 H) radhiyallaahu 'anhu marnaba intestate, "Waxaan intestate inaad, ka cabsada Ilaah. Oo weliba waxaan ka mid doonista si aad u had iyo jeer (akhri iyo maqsuud) content ee Al-Aayado-ah sababtoo ah waxa uu nalka habeenkii mugdi ah iyo tilmaamaha oo jooga iftiin dhalaalaya ahaa. Ogaada in Al-Aayado-ah waxay keeni kartaa si aad u gaadho wax oo qiimaha waa mid aad u sarreeya .... "
[Guuriyeen buugga The Road inay Baahida Jannada Sciences "Baahida Free Science", Author ee Yazid ibn Abdul Qadir Jawas, Publishers Library At-Taqwa, PO BOX 264 - 16 001 AHN West Java - Indonesia, 1428H Rabi'uts Tsani marka koowaad la daabacay / April 2007M]